Let's talk about IT: How to Backup Archive Folders in Outlook
ဒီနေ့ ရုံးမှာ outlook ရဲ့ pst file size က3GB လောက်ရှိလာတာနဲ့ နည်းနည်း နှေးစပြုလာပါတယ်။ ဒါကလည်း outlook ကိုလုပ်ထားတဲ့ပုံကိုက pst file နှစ်ခုမှာ အားလုံးသိမ်းထားလို့ပါ။ Mail box အတွက် pst်file တစ်ဖိုင်၊ Archive အတွက် pst file တစ်ဖိုင်ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ archive file ဟာ fat ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လို manage လုပ်ရသလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ Divinity ကို ဖုန်းဆက်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။
ပြောချင်တာကတော့ မသိရင် သိတဲ့သူမေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နောက်ဆုံးမှ ရှာဖတ်ကြည့်။ အဲဒါ သက်သာလွယ်ကူတဲ့နည်းပဲ။
Step 1. (File Menu က Data File Managementကို ၀င်လိုက်ပါ။)
Step 2. (Go to archive.pst file folder path)
ဖိုင်ကတော့ များသောအားဖြင့် outlook folder ဖြစ်တဲ့ /Microsoft/outlook ထဲမှာရှိတတ်ပါတယ်။ ဖိုင်နေရာမသိရင်လည်း အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံထဲက filename နေရာမှာရှာကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။ ဖိုင်နေရာကိုသိဖို့ပါ။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုသေးပါဘူး။
Step 3. (Remove archive.pst file)
ဘီယာဟာ အရက်မဟုတ်ပါလို့ကြော်ငြာသီချင်းထဲမှာဆိုသလို၊ Remove ဟာ Delete မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းနည်းတော့ confusing ဖြစ်စေသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းက Remove Link ပါ။ ဖိုင်ကိုမဖျက်ပါဘူး။ Archive Link ကိုဖျက်လိုက်တာပါ။ archive ဖိုင်ကြီးက ကျန်းမာချမ်းသာစွာ တိုင်းပြည်တာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ဖို့ အသင့်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
Step4(archive.pst ကို နာမည်ပြောင်းပါ။)
Rename လုပ်လိုက်ပါ။ ဥပမာ 2010 to 2011 April 14 Backup Archive.pst စသဖြင့်။
Step5(Backup လုပ်ထားတဲ့ Archive ဖိုင် (Renamed Archive) ကို ပြန် Add ပါ။)
နောက်ပြီး။ Inbox ကို Archive လုပ်ကြည့်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် archive.pst အသစ်တစ်ခု ကို သူ့ဘာသာသူ ပြန်ပြီး create လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အရင် Archive folder ကတော့ ဆက်လက်ကြီးထွားမလာဘဲ Backup ဘ၀နဲ့ တစ်သက်လုံး အရိုးထုတ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုအားဖြင့် သပ်ရပ်လှပ စနစ်ကျတဲ့ Archive လေးတွေ သိမ်းထားပြီး သောင်းခြောက်ထောင်မေးလ်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Thanks bro, Divinity for your help.
Posted by Zero Divided by Zero is Zero (Brahmagupta Rule) at 2:25 AM
Labels: archive file, how to backup